Dihy – Zarasoa : hanomboka amin’ny herinandro ny fianarana | NewsMada
Dihy – Zarasoa : hanomboka amin’ny herinandro ny fianarana
Tokony ho nanomboka ny 5 oktobra teo ny fianarana dihy, iarahana amin’ny kaompania Zarasoa, ao amin’ny Cercle germano-malagasy (CGM), saingy nahemotra amin’io herinandro ho avy io noho ny fahalasanan’ny talen’ity foibe ity, araka ny nambaran’i Saroy Rakotosolofo, mpitarika ity kaompania ity.
Efa nanomboka tamin’ny 2010 ny fampianarana dihy ataon-dry Saroy ka manaraka ny taom-pianarana mihitsy izany. Tsy hifarana raha tsy ny 16 jona 2018 ny amin’ity taom-pianarana vaovao ity. Misokatra ho an’ny 4 hatramin’ny lehibe indrindra (mety hihoatra ny 70 taona) ny fiofanana momba ny dihy. Tsy anavahana io, na vao hisantatra na efa mahay ny fototra.
Na izany aza, mizara sokajy telo ny ankizy : 4 sy 5 taona, manao ny « éveil à la danse » ; ny 6 sy 7 taona, misantatra ; ny 8 hatramin’ny 11 taona, mianatra « afro-dance », dihy nentim-paharazana, « rombo tap-dance » ary « danse néo-classique ».
Ankoatra ny fianarana, manampy ny mpianatra amin’ny fivelarana, eo amin’ny tontolon’ny dihy hatrany, ny hetsika samihafa, karakarain’ny Zarasoa. Anisan’izany ny atrikasa iarahana amin’ny matihanina (avy any ivelany na avy eto an-toerana), indroa isan-taona, farafahakeliny. Eo koa ny fandraisan’ny mpianatra anjara amin’ny « festivals » samihafa.
Natao ho an’ny rehetra, mpianatra ao amin’ny Zarasoa na tsia, kosa ny fandefasana horonantsary fanadihadiana manodidina ny dihy, isaky ny asabotsy faharoa amin’ny volana. Arahina fifanakalozan-kevitra izany.